Epistily faharoa nosoratan'i Petera - Wikipedia
Ny Epistily faharoa nosoratan' i Petera na Epistola faharoa nosoratan' i Piera na Taratasy faharoa nosoratan' i Piera dia boky ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Testamenta Vaovao izay isan' ireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an' ny fiangonana rehetra sy ny olona rehetra. Miova eo anelanelan' ny taona 60 sy 160 ny fotoana heverin' ny mpikaroka fa nanoratana azy. Misy toko 3 ity boky ity.
Ny tanjon' ny mpanoratra dia ny hanohitra ny fampianarana diso tsy araka ny Soratra Masina izay nanosika ny maro tamin' ny fiainam-pilibana. Enti-manohitra izany fampiarana diso izany ny fahalalana marina an' Andriamanitra sy an' i Jesoa Kristy. Resahiny koa ny antony mbola tsy isehoan' ny fiavian' i Kristy fanindroany.
2 Ny fanoratana sy fandraisana ilay epistily
2.3 Fandraisana ny epistily
Δεύτερη Επιστολή Πέτρου / Deuterê Epistolê Petrou no anaran' io epistily io amin' ny teny grika fa Epistula II Petri kosa amin' ny teny latina.
Ny fanoratana sy fandraisana ilay epistilyHanova
Voasoratra ao amin' ity epistily ity fa i "Simôna Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesoa Kristy" no nanoratra azy (2Pet. 1.1); vavolombelona nanatri-maso ny fiovan-tarehin' i Kristy (2Pet. 1.16-18); rahalahin' i Paoly (2Pet. 3.15) sady mpanoratra ny Epistily voalohany nosoratan' i Petera (2Pet. 3.1). Ny maha nanoratra an' io epistily faharoa io an' i Petera dia efa nampiahiahy ny Fiangonana tany aloha sy ny ankamaroan' ireo mpanampahaizana manokana. Ny mpanoratra dia maneho ny fahalalany tsara ny Soratra Masina (ny Testamenta Taloha) sy ny lovatsofina (na lovam-pampianarana) apôkaliptika jiosy.
Nandray ampahany be amin' ny Epistily nosoratan' i Joda (hatramin' ny Joda 2.1 hatramin' ny Joda 3.3) ny Epistily faharoan' i Petera.
Ankehitriny dia heverin' ny mpikaroka fa voasoratra tamin'ny taona 125 taor. J.K. tany ho any ny Epistily faharoan'i Petera. Raha marina izany dia io epistily io no soratra natao farany indrindra amin'ireo ao amin'ny Testamenta Vaovao. Mety ireo mpianatr'i Petera no nampandry an-tsoratra azy.
Fandraisana ny epistilyHanova
Ny fiangonana tany Aleksandria no nandray azy voalohany alohan'ny haneken'ny fiangonana hafa azy. Izy no bokin'ny Testamenta Vaovao, miaraka amin'ny Apokalipsin'i Joany, izay tsy neken'ny Fiangonana manontolo ho isan'ny kanonan'ny Baiboly kristiana raha tsy fotoana ela dia ela taorian'ny nanoratana azy. Tamin'ny taonjato faha-5 izy vao neken'ny ankamaroan'ny fiangonana.
Ny Epistily faharoan' i Petera dia iray tarika amin' ny sokajin-tsoratra "Testamenta" fa tsy tena isan' ny sokajy "Epistily" (na "Epistola" na "Taratasy"). Lahateny fanaovam-beloma sahala amin'izay ataon'ireo olo-malaza amin'ny fotoana ahafatesany ka ampahatsiahivany ireo zava-dehibe ao amin'ny foto-pampianaram-pinoana io epistily io.
Ny toko voalohany dia mananatra ny Kristiana mba hanamafy ny fiantsoana azy ireo sy ny nifidianana azy ireo; ao amin'io epistily io no ahitana ny fanambaràna mazava fa tsindrimandry (na fanilovana) avy amin'ny Fanahy Masina no nanoratana ny Soratra Masina (2Pet. 1.20-21). Ny toko faharoa dia mampitandrina ny mpino tsy hoazon'ny fampianaran-dison'ny mpampianatra sadoka.
Ny toko fahatelo dia miresaka ny amin'ny andro farany; manamafy ny finoan'ny Kristiana amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany (na parosia), izay nandrasan'izy ireo sady efa antomotra, ity taratasy ity. Ambarany anefa fa tsy mitovy ny lanjan'ny fotoana araka ny hevitr'Andriamanitra sy eo araka ny hevitr'olombelona (2Pet. 3.8).
"19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon' Andriamanitra tamin' ny andron' i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran' ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano," (Ny Baiboly).
Amin'ny teny grika dia izao no voasoratra: "ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε…."
Epistily voalohany nosoratan'i Jaona
Epistily faharoa nosoratan'i Jaona
Epistily fahatelo nosoratan'i Jaona
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_faharoa_nosoratan%27i_Petera&oldid=1038779"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 10:36
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 10:36 ity pejy ity.